Nikeza i-GIMP ukubukeka kwe-Photoshop | Kusuka kuLinux
Esikhathini esithile esedlule ngikukhombisile ukuthi kanjani nikeza i-GIMP ukubukeka kwe-Photoshop CS6Kodwa-ke, ububi baleyo ndlela ukuthi ibeka iwindi le- I-GIMP ngombala omnyama. Lolu hlobo lokulungiswa noma ukulungisa, zilungele ukusiza ekufudukeni nasekuguqukeni kwabasebenzisi be Photoshop kumathuluzi Open Source.
Via I-Webupd8 Ngithola ngenye indlela yokwenza, ngalesi sikhathi, ngemibala ekhanyayo; Futhi hhayi lokho kuphela, kepha manje sesingasebenzisa izinqamuleli zekhibhodi njengase-Photoshop futhi amaphaneli asemaceleni abekwe ngendlela efanayo nethuluzi le-Adobe. Lokhu kungumphumela wami we-KDE:
El Hack kuvela esandleni se +UMartin Owens futhi kulula ukuyisebenzisa.
Ngokusebenzisa le hack sizolahlekelwa izintandokazi nokulungiselelwa esikuchaze ku-GIMP
1 Nikeza i-GIMP ukubukeka kwe-Photoshop
2 Buyisela ushintsho
Okufanele sikwenze ukufinyelela ekhasini le- UMartin Owens kuDeviantart bese ulanda ifayela elilandelayo (engilishiya kusixhumanisi salo esiqondile).
Landa ama-Photoshop Tweaks we-GIMP
Uma sesilandile siqhubeka nokwenza isipele sefolda yethu yokumisa ye-GIMP ekhaya / ekhaya.
Lezi zilungiselelo zenzelwe i-GIMP 2.8, ngakho-ke uma usebenzisa i-GIMP 2.9 (noma enye inguqulo ekuthuthukisweni), akuyona yonke into ezosebenza. Isibonelo, izinqamuleli zekhibhodi kungenzeka zingasebenzi kahle futhi kunenkinga encane ngezithonjana.
Noma kunjalo, uma sifuna ukukwenza ngohlobo oluphakeme kune-2.8, okufanele sikwenze:
Manje sivula ifayili elilandiwe ku / ikhaya lethu, ngoba linefolda ebizwa ngokuthi .gimp-2.8 futhi yilokho.
Uma sisebenzisa uhlobo oluphakeme lwe-GIMP, kufanele sikopishe ifolda .gimp-2.8 ku- ~ / .config / GIMP / bese siyiqamba kabusha ibe ngu-2.9, okusho ukuthi:
Umphumela uyamangalisa ngempela.
Ukubuyela emuva kufanele sibuyise kuphela amafolda esiwasekele:
rm -r ~ / .gimp-2.8 mv ~ / .gimp-2.8-ubudala ~ / .gimp-2.8
rm -r ~ / .config / GIMP / 2.9 mv ~ / .config / GIMP / 2.9-ubudala ~ / .config / GIMP / 2.9
Futhi yilokho kuphela. Khumbula ukuthi izinqamuleli zekhibhodi zingashintsha kanye nezinye izinketho nokunye.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Nikeza i-GIMP ukubukeka kwe-Photoshop
Iqiniso ukuthi kuyasiza kakhulu ukukwenza kumakhompyutha wabantu abangajwayele ukufaka izicelo zamawindi amaningi. Bakhala kakhulu ngalokhu ku-GIMP.
I-GIMP ishintshelwa ku-Window eyodwa ngenketho yemenyu elula kusukela enguqulweni 2.8
Akukona nje nge-Windows eyodwa, kepha mayelana nezithonjana nendlela amaphaneli ahlelwe ngayo.
Yebo, ngiyakuqonda lokho kusuka kokuthunyelwe kwakho elav, kepha ngiphendula ngoba, ngifunda okushiwo nguJorge-1987 futhi ngiyacaphuna: «Iqiniso ukuthi kuyasiza kakhulu ukukwenza emaqenjini abantu abangajwayele ukufaka izicelo zamawindi amaningi. Bakhala kakhulu ngalokhu kwi-GIMP. ”Futhi, njengoba ngikuqonda, uthi okubabambayo yimodi yamawindi amaningi; hhayi umehluko ezithombeni noma ekuhlelweni kwamapaneli. Angazi noma ngiyazichaza yini. Iphendule kuphela kulokho umsebenzisi akuthayiphe ngqo.
Ah yebo yebo .. Ngiqondile 😛
Yebo, ngaleyo ndlela udla isikhala ezinhlangothini zombili zesikrini ushiya izimbobo ezingenalutho ezansi ... ngaphandle kokuthi unesikrini esingamasentimitha angama-28, angicabangi ukuthi kusebenza kakhulu.
Manje zama ukususa ibhokisi lengxoxo ebhokisini lamathuluzi (lawo mabhokisi amabili anombala omkhulu nowesibili) ngale ndlela unganciphisa ibhokisi lamathuluzi liye emgqeni owodwa wezithonjana (ezincane) naku-Windows, uletha ingxoxo yombala kukholamu yesokudla kanye nezendlalelo nokunye.
Ngokwenza lokhu ugcina isikhala esiningi kusiqaphi esijwayelekile esingu-21-intshi.
Isibonelo sendlela enginayo ngayo: https://farm8.staticflickr.com/7364/16217560217_76e24b0546_c.jpg
Okuthunyelwe okuhle kakhulu 😉
Ngendlela u-Elav, angazi noma kuzoba yimina kuphela, kepha ngithola iqiniso lokuthi ukuchofoza ezithombeni akushintshi usayizi ngakho-ke imininingwane ayaziswa, kufanele benze okuthile ngakho.
Usho izithombe kokuthunyelwe?
Yebo uma kunjalo, sengivele ngishintshe usayizi 😉
Yebo, zona lezo ... Manje imininingwane isiyaziswa kangcono. Kuhle kakhulu !!
Umbhalo osephaneli elingakwesobunxele, ngaphansi kwesikhi sombala, awukwazi ukususwa, akunjalo? Ngicabanga ukuthi uyisusile ekuthumbeni ngokuyihlela, ngoba esikhundleni sayo kunemivimbo emincane ngethoni ekhanyayo engwevu.
faka i-hover zoom extension esipheqululini sakho, izokusindisa noma ngokuchofoza nje, isebenza kumasayithi amaningi.
Ngikushiyela uchungechunge lwamaphakethe wezingqikithi zesithonjana seGimp engiqoqe esikhathini esithile esidlule:
Ngokwami, esikhundleni sokusebenzisa izithonjana ze-Photoshop, ngisebenzisa izithonjana ezingokomfanekiso. Zingcono, ziyafana kakhulu futhi esikhathini esithile esedlule ngilungiselele futhi ngakha amaphakheji amabili, eyodwa yezingqikithi zedeskithophu elula kanti enye yezingqikithi ezimnyama:
Ungazilanda kusuka lapha:
Ngiyabonga Jesusda !!! futhi Siyabonga ku-Desdelinux ngakho konke okwenzayo. Umthombo Ovulekile Yonke Indawo Umphakathi !!! 🙂
Ngine-GIMP 2.8.10 futhi ayisebenzi kimi.
Susa i- ~ / .gimp-2.8
Futhi vula ifolda ye-.gimp-2.8 ku-ZIP ku ~ /
Futhi akuzange kungisebenzele, noma ngabe ngisula ukucushwa enganginakho. Yini engiyenzayo engalungile?
PS: Ngiku-Ubuntu 14.10
Awudingi ukususa ifolda .gimp-2.8, kufanele ukopishe izingqikithi kufolda ye-.gimp-2.8 / themes /
I-Pej: ingqikithi engokomfanekiso kufanele ibe ku:
uma ususa yonke i-.
IMalagueños yangempela futhi yamahhala kusho
Nakhu ukuthi ikopisha kanjani okuqukethwe yifolda yezindikimba ku- / usr/share/gimp/2.0/themes/photoshopware
Phendula kuma-Malagueños woqobo futhi mahhala
Okukhazimulayo okukhanyayo. Njenge-CGArtist angenzi lutho ngaphandle kokufisa ukufuduka (ngangokunokwenzeka), ukukhulula isoftware, kepha ushintsho luba nzima kakhulu lapho izakhiwo nakho konke kushintsha. Ngangimthanda uKrita ngokunembile ngalokho.
Ngokufanayo, njenge-Photoshop ... Ngiyazibuza ngokusetshenziswa kwangempela kwalawa mathuluzi ngaphandle kwamaphutha wokuthinta kabusha (ukuphinda uthinte kabusha sesivele sine-Lightroom noma i-Darktable). Ngokwalokho engikwenzayo ngezikhathi ezithile (ukwakheka kwe-2D), ngincamela uKrita.
UDiego Redero kusho
Mina ngokwami ​​angizithandi izinhlelo noma izinhlelo zokubukeka njengabanye.
Phendula u-Diego Redero
Ngiyabonga kakhulu, bengisebenzisa iGimp isikhathi eside, ngaphandle kokuba ngungoti omkhulu ekusetshenzisweni kwayo, kepha ngikwazile ukuyifaka emisebenzini yami emincane, ihluzo, manje sengingathelela ozakwethu ukuthi benze isinqumo sokuqala ukuyisebenzisa. Jabulela Buddy!
Akira kazama kusho
Ngiyasithanda, kade ngangisebenzisa lesi silungiselelo, noma ngabe ngasizathu simbe sandisa kakhulu isikhathi esisithathayo ukuvala i-GIMP, kwesinye isikhathi ngisho nomyalezo uvela uthi lolu hlelo aluphenduli futhi ngemizuzwana embalwa ekugcineni luyavalwa.
Angazi noma kwenzeka kimi kuphela.
Phendula u-Akira Kazama
Sawubona Jesu, angithandi noma yiluphi ushintsho lapho ngiqala iGimp, kunalokho, kwenzeka kimi okufanayo nawe, ukuvala iseshini uma iwindi lesixwayiso lesicelo livela isikhashana elingaphenduli ngokucela ukuvalwa kepha lizivala ngaphandle kokudinga ukungenelela kwami njengokujwayelekile.
Ngokumangazayo, lokhu kwenziwa kuphela kwi-laptop yami endala, hhayi kukhompyutha yami yedeskithophu yamanje, ngakho-ke kungenzeka ukuthi kungenxa yokushoda kwezinsizakusebenza ... qaphela! Angazi ukuthi unayiphi imishini, ngimane ngiphawule lokhu ngokuya ngesipiliyoni sami ngemuva kokuhlola imodeli kumakhompyutha ami amabili.
Noma yimiphi imibono evela kothuthuke kakhulu?
Kwenzeke kimi kakhulu nge-Athlon II X2 yami endala njengamanje, ngeFX 6300 yami yamanje, into exakayo ukuthi okokuqala ngqa ukuqala i-GIMP, ivaliwe ngokujwayelekile kuwo womabili amakhompyutha, kusuka ekuqaleni kwesibili ukuthi kuthatha isikhathi ukuvala.
Kuhle kakhulu, ilusizo kakhulu lapho ngisebenza khona, ngiyabonga kakhulu.
Yini okukhona, akukhona ukuthi angiyithandi idizayini ye-GIMP, ukuthi angithandi ukuthi kuzoba namathebhu angama-20 azimele
Into embi ngeGimp, inokwandiswa okujwayelekile kweXCF, ... futhi ayikuvumeli ukuthi uyishintshe ibe yiJPG, elula.
Kusuka kumsebenzisi wangaphambili we-Debian no-ArchLinux, imikhonzo evela ku… FreeBSD Unix.
Uhlobo lwendabuko lwe-GIMP yi-XCF, nokuyilokho okukuvumela ukuthi ugcine zonke izici zamafayela wakho njengezendlalelo, imizila, njll.
Ngokusebenzisa izinketho zokuthekelisa nezokungenisa ungaguqula futhi ulondoloze i-JPG, PNG noma i-GIF phakathi kwamafomethi amaningi.
Ngendlela, ukusebenzisa izingqimba kulula kakhulu ukwenza i-animated GIF noma ukukhiqiza i-PDF
Njengamanje ngicabanga ukuthi kufanele ubheke i-KRITA. Angazi ukuthi kungani ngikuthola kungcono kakhulu kune-gimp ngazo zonke izindlela.
bese uqhubeka nalokhu
hamba i-comepam nayi ingwe
Leli sayithi namasu alo we-geek. Ngiyayithanda i-Gimp futhi ngesici esihlanganisiwe sefasitela angisidingi ukuthi sibonakale njenganoma ngubani omunye umuntu.
nakwinguqulo yamawindows kuyasebenza futhi?
Yebo, kuyasebenza futhi.
Le mod muhle ... inika ukubukeka okuhle kwiGimp.
Ukugxila emachwebeni kanjena ngombono wami kuyasebenza impela, ngikubona kufana kakhulu nemodi »yewindi elilodwa» kepha ngoshintsho oluncane ... izithonjana zamathuluzi «amathuluzi» asesithunzini zikwenza ubukeke, (nge Imvume kaJesu ngizozama futhi i-Dpixel kubha yamathuluzi, ngendlela engithola ngayo ibhulogi yakho ithakazelisa kakhulu futhi ngiyingeze kuzintandokazi zami), okubuhlungu ukuthi ngakolunye uhlangothi nakumamenyu sithola izithonjana ezijwayelekile ezingahambelani nezintsha izithonjana ezinikezwe yile mod, ngakolunye uhlangothi, ziletha izinketho zamathuluzi namabhulashi kumathebhu wedokhi lezendlalelo, kanye nomlando wezithombe nezithombe ezivulekile ezansi, kubonakala kuphumelela kakhulu futhi kunethezekile.
Kunoma ikuphi, abalandeli bamawindi ahlukene bahlala benenketho yokungahloli imodi "yewindi elilodwa" kumenyu ye- "windows" ukuqhubeka nokusebenza cishe njengaku-Gimp yasekuqaleni.
Ngiyizamile nge-10 ″ Hp mini yami futhi ingxenye engezansi iyanyamalala ukuze ngibe nenketho yokukwazi ukuqhubeka ngisebenze kumawindi ahlukene kuyaziswa, kunalokho kukhompyutha yami yedeskithophu lapho ngine-17 ″ monitor Le modeli yewindi elilodwa "lokuthwebula izithombe" ibukeka iyinhle: S ... hehehe, nje futhi ukuqondana nokuphawula kungaba kuhle esikrinini se-panoramic.
Ngizobheka uKrita obonakala ebukeka emuhle kakhulu, yize eyiKDE, ukuyifaka kuXubuntu angazi ... kepha iqiniso ukuthi ngibheke iwebhusayithi yakhe futhi angicabangi ukuthi ngingamelana ... ngicabanga ukuthi uma engifaka Imitapo yolwazi ye-KDE ifaka izinhlelo zokusebenza namanye amaphakheji engingafuni futhi ehlala engivimba ekuhloleni izinhlelo zokusebenza kule ndawo.
Ngithemba ukusiza umuntu ngalolu hlobo lokubuyekeza engikunikelayo ngenhloso yokwenza okuncane kuze kufike ezingeni ulwazi lwami olungivumela ngalo.
Ngibonga uDesdeLinux ngalokhu kungena futhi ngibonga bonke labo abaphawula abangenza ngifunde okwengeziwe nsuku zonke, ngithola iziphetho lapha nalaphaya…. 🙂